प्रधानमन्त्री देउवा छैटौँ पटक विजयी
डडेल्धुरा, २४ मंसिर , डेल्धुराबाट प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँगे्रसका सभापति शेरबहादुर देउवा विजयी हुनुभएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा डडेल्धुराबाट छैटौँपटक विजयी हुनुभएको हो । देउवाले २८ हजार ४४ मत ल्याएर विजयी हुनुभएको छ भने उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी वाम गठबन्धनका उम्मेदवार माओवादीका खगराज भट्टले २१ हजार ११५ मत ल्याएर पराजित हुनुभएको हो । माओवादीका भट्ट...
को हुन् पहिलो निर्वा्चित महिला सांसद कमला रोका ?
काठमाडौँ, २२ मंसिर ः नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उम्मेदवार कमला रोका पूर्वी रुकुमबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको पहिलो निर्वा्चित महिला सांसद बन्नुभएको छ । कान्छो जिल्लाको रुपमा परिचित पूर्वी रुकुमबाट विजयको खाता खोलेर वाम गठबन्धनका उम्मेदवार रोकाले संघीय नेपालको नयाँ यात्रा शुरु गर्नुभएको छ । माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र संघर्षमा महिला छापामारको रुपमा...
हुम्लामा बामगठबन्धनका दलबहादुर रावल बिजयी ।
हुम्ला, २२ मंसिर जिल्लामा प्रदेशसभा ‘क’ मा वाम गठबन्धनका तर्फबाट एमालेका दलबहादुर रावल सात हजार १५८ मत ल्याई विजयी हुनुभएको छ । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी काँग्रेसका थानबहादुर रोकायाले चार हजार ८११ मत प्राप्त गर्नुभयो । अहिले प्रदेश ‘ख’ को मत गणना शुरु भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत मोहनीप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो...
धेरै मानिसहरुले यसलाई हतारमा गरिएको विश्लेषण ठान्न सक्छन् । तर, मतगणनाको सुरुआती रुझानले के देखाइसकेको छ भने यो चुनावमा कांग्रेसले शर्मनाक हार व्यहोर्ने र वाम गठबन्धनले सुविधाजनक बहुमत पाउने पक्कापक्की जस्तै छ । कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडको दाबीअनुसार पहिलो चरणमा मंसिर १० गते चुनाव भएका ३२ जिल्लामा माओवादी र एमालेले बढी सिट जिते पनि दोस्रो चरणमा चुनाव भएका ४५...
शव बोकेरै मतदान गर्न केन्द्रमा पुगे मलामी
मंसिर २१, २०७४, पाल्पा जिल्लाको रिब्दीकोट गाउँपालिका–७, मैनादीको हर्केडाँडाकी एक महिलाको मृत्यु भएपछि शव बोकेरै मतदान केन्द्रमा मलामी मतदान गर्न पुगेका छन् । हर्केडाँडाकी १०१ वर्षीया लिलाकुमारी गैरेको आज बिहान मृत्यु भएपछि मलामी शव बोकेर नै मतदान केन्द्रमा पुगेर मृतकका छोरा युद्धराज गैरेले बतासे मतदान केन्द्रमा मतदान गरेका छन् । उनीलगायत १६ जना मलामीले बतासे...
सप्तरीबाट बाम गठबन्धनका उम्मेदवार यादवको उम्मेदवारी खारेज ।
सोलु एफ एम÷सप्तरी, मंसिर २० सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभातर्फ सप्तरीबाट वाम गठबन्धनका उम्मेदवार शिवपुजन यादवको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको छ । न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले आज यादवको उम्मेदवारी खारेज गर्ने आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको हो । यादव कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोगमा विशेष...
दोस्रो चरणमा हुने निर्वाचनको तयारी पुरा, ढुक्क भएर मतदान गर्नुहोस ः प्रमुख आयुक्त ।
सोलु एफ एम मंसिर २०, २०७४ ः काठमान्डौ । निर्वाचन आयोगले भोलि हुने दोस्रो चरणको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा बुधबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले ४५ जिल्लामा बिहीबार हुन लागेको निर्वाचनको तयारी पूरा भएको जानकारी दिएका हुन् । प्रमुख...
काठमाडौंमा पानी पर्‍यो, मनाङमा हिमपात
२० मंसिर–मौसम बदलीका कारण काठमाडौं उपत्यकामा हल्का पानी परेको छ । मनाङ लगायतका हिमाली जिल्लामा भने हिमपात भएको छ । मौसमविद समीर श्रेष्ठले काठमाडौं र ललितपुरमा हल्का पानी परेको जानकारी दिए । उनका अनुसार भक्तपुरमा भने पानी परेको छैन । यस्तै पश्चिम नेपालका धेरैजसो हिमाली बस्तीमा हिउँ परेको श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘हिउँ कहाँ-कहाँ कति पर्‍यो भनेर नाप्ने कण्डिसन...
शिवपुजनको रिटमा सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ
उम्मेदवार खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्लाही ४ का वाम गठबन्धनका उम्मेदवार शिवपुजन राय यादवले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतलले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश दिपकराज जोशीको इजलासले लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्नेबारे छलफल का लागि भोलि नै बोलाएको छ । पहिलो संविधानसभामा फोरमका सांसद रहेका शिवपुजनलाई रातो पासपोर्ट...
बम बिस्पोटमा परेका गगनले भने, ‘संयोगले बाँचे’
१८ मंसिर–काठमाडौंको चपलीमा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापालाई लक्षित गरेर बम विस्फोट भएको छ । विस्फोटमा काठमाडौं ४ का उम्मेदवार थापासहित ११ जना घाइते भएका छन् । उनीहरु मध्ये चारको अवस्था गम्भीर छ । शिक्षण अस्पतालमा उपचारपछि गगन थापा अहिले डिस्चार्च भईसकेका छन् । घरदैलो अभियानका क्रममा सडकमा हिडिँरहँदा विस्फोट भएको थापाले बताए । भने, ‘घरदैलो निर्धारित समयभन्दा ढिला...
दोस्रो चरणमा कति मत खस्ला ?
मंसिर १७ – पहिलो चरणमा भएको मंसिर १० को चुनावमा ३२ जिल्लाका मतदाताले हालेको मतको बाकस मंसिर २१ गते ५ बजेदेखि खुल्न थाल्नेछ । बाकस खुल्न थालेपछि धेरैको धड्कन रोकिने नतिजा पनि आउन थाल्नेछ । किनकी पहिलो चरणको चुनावमा उठेका ७ सय २ जना उम्मेदवार मध्ये ३७ जनाले प्रतिनिधिसभामा र ७४ जनाले मात्र प्रदेशसभामा जित्ने छन् । बाँकी ५ सय ९१ जना उम्मेदवार हार्ने निश्चित छ । पहिलो चरणमा...
धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–४ बोरोङका उत्तम तामाङ अहेव हुनुहुन्छ । उहाँलाई मंसिर १० गते भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावको पहिलो चरणमा सरकारले कर्मचारीको रुपमा तिप्लिङमा खटाएको थियो । उहाँ चुनाव गराउन जानुभयो । मंसिर १० गते तिप्लिङमा चुनाव गराइरहँदा उहाँको नाममा मुक्रावदेवी मावि मतदान केन्द्रबाट भोट खस्यो । अफ्नो नाममा भोट खसेको तामाङलाई जानकारी छैन...
१५ मंसिर–सरकारले इस्लाम धर्मका प्रवर्तक हजरत मुहम्मद सल्ललल्लाहो अलैहे वोसल्लमको जन्मदिनको अवसरमा शुक्रबार विदा दिएको छ। उनी इस्लाम धर्मका प्रवर्तक र अल्लाहका अन्तिम शन्देशवाहक मानिन्छन्। हजरत मुहम्मदको जन्मदिन नेपालका मुस्लिम समुदायले पनि श्रद्धापूर्वक मनाउने गर्छन् । शुक्रबार सबै सरकारी कार्यालय, विदेशस्थित नेपाली नियोगहरुमा समेत सार्वजनिक विदा दिने...
गत शुक्रवार कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा प्रतिकिलो ८५ रुपैयाँमा प्याज खरिद गरेका उपभोक्ताले त्यसको भोलिपल्टै ११५ रुपैयाँ तिरे । त्यसयता मंगलबार फेरि प्याजको भाउ बढेर प्रतिकिलो १२५ रुपैयाँ पुगेको छ । यो कालिमाटी तरकारी बजारभित्रको भाउ हो । बजारमा त अहिले प्याजको भाउ प्रतिकिलो १५० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । एक महिनाअघि प्रतिकिलो ७५ रुपैयाँसम्ममा प्याजको खरिद...
उदयपुरमा बम विष्फोट : कांग्रेस उम्मेदवार कार्कीसहित ६ जना घाइते
उदयपुरको दनुवारबेसीमा उम्मेदवारलाई लक्षित गरेर बम विस्फोट भएको छ । विस्फोटमा परि प्रतिनिधिसभाका लागि क्षेत्र नम्बर २ मा कांग्रेसका उम्मेदवार नारायणबहादुर कार्कीसहित ६ जना घाइते भएका छन् । उहाँको चुनाव प्रचारमा प्रयोग भएको बा १५ च ७८०६ नम्बरको गाडीलाई लक्षित गरी बम विस्फोट भएको हो । विस्फोटमा परि घाइते हुनुभएका कांग्रेस उम्मेदवार कार्कीको अवस्था गम्भीर रहेको उदयपुरका...